Kajy ny jiro amin'ny jiro hitsitsy angovo | Fanavaozana maintso
Tomas Bigorda | | Mitsitsy angovo, Toekarena an-trano, Angovo azo havaozina
Mba hamonjy dia mila mampiasa isika Tsela-bola mamonjy angovo, ary sokajinay araka ny azy ireo famirapiratana, amin'ny alàlan'ny refy fandrefesana "lumens"Na"lumens", Izay manondro ny habetsaky ny hazavana navoaka.
Mifanohitra amin'izay aza, takamoa (ny zokiny indrindra) ny refiny dia ny Watts (W), izany dia maneho hoe ohatrinona herinaratra mandany.
Ny lahatsoratra manaraka dia manandrana manazava ny fomba fanaovana kajy ny Lumens amin'ny jiro.
1 Inona ny atao hoe Lumen? ary ny fomba fanaovana kajy azy ireo
2 Sehatra mirehitra tsara
Inona ny atao hoe Lumen? ary ny fomba fanaovana kajy azy ireo
Ny fanontaniana voalohany tokony hapetraka dia ny manontany tena amin'ny tenantsika hoe inona ireo Lumens?
Ny lumens, dia singa iray amin'ny rafitra iraisam-pirenena momba ny fandrefesana handrefesana ny flux luminous, refin'ny herinaratra manjelanjelatra navoakan'ny loharanom-baovao, amin'ity tranga ity ny jiro.
Mba hahalala ny lumens izay mamoaka jiro LED Misy raikipohy: lumens tena izy = isan'ny watts x 70, 70 izay sanda antonony hitantsika amin'ny ankamaroan'ny jiro. Midika izany, jiro LED 12W dia hanolotra famoahana maivana 840 lm. Izay mihoatra na latsaka no miteraka a Bohlam mandrehitra 60W. Araka ny hitanao, amin'ny famokarana jiro mitovy amin'izany dia mitsitsy 48w isaky ny jirony mandrehitra soloinay.
Sehatra mirehitra tsara
Mba hanatsarana ny fampiononana ireo efitrano samihafa amin'ny trano dia tsy maintsy mirehitra tsara izy rehetra. Ary zava-dehibe ny fahalalana izany "Mazava tsara" midika fa ny habaka tsirairay dia tsy maintsy manana jiro sahaza: na mihoatra na ambany noho ny ilaina. Raha tsy ampy ny haben'ny jiro, dia voatery miasa be loatra ny maso, ary izany dia miteraka havizanana amin'ny fahitana, izay miteraka soritr'aretina toy ny aretin'andoha, fahasosorana amin'ny maso ary fanindronana, vesatry ny hodi-maso, sns.
Raha vantany vao nohazavaina tsara ilay singa dia afaka manandrana manisa isika firy ny jiro ilaina amin'ny famonjy angovo ho an'ny toerana manokana, izay mety ho ampahany amin'ny trano.
Midika izany fa raha misy jiro manazava ny efi-trano 150 lumen, ary ny velaran'ny efitrano dia 10 metatra toradroa, ny haavon'ny hazavana dia 15 lx.
Lakozia: ny tolo-kevitra momba ny jiro ankapobeny dia eo anelanelan'ny 200 sy 300 lx, na dia ho an'ny sehatry ny asa manokana aza (izay tapaka sy omanina ny sakafo) dia mahatratra 500 lx izany.
Mba hanamorana ny fifindrana avy amin'ny watts mankany lumens, izay zavatra somary vaovao ihany, misy tabilao manao kajy haingana watt mankany lumens (takamoa mora vidy):
Sanda amin'ny lumens (lm) FANAMPIANA FANAMPINY AO AMIN'NY RANO (W) ARAKA NY ANJARA LOMA
LED Incandescent Halogens CFL sy fluorescent
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Kajy ny lumens herinaratra mitsitsy angovo
osvaldo peraza dia hoy izy:
Nanazava tsara. Misaotra anao
Mamaly an'i osvaldo peraza